Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal culus oo shalay ka qarxay duleedka Qabridahare
Dagaal culus oo shalay ka qarxay duleedka Qabridahare
Waxaa shalayoy taariikhda ahayd 9/5/13 dagaal adag uu ka dhacay afaafka magaalada Qabridahare goobta caanka ah ee loo yaqaano Cilmi iyo Magan. N/hurayaasha CWXO oo halkaa u joogay arima la xidhiidha halganka iyo waxaa isku helay ciidanka cadawga oo tilmaan ku socday waxaana goobta loogu gaystay cadawga khasaare laxaadleh ayadoo lagaga gubay gaadhi wayn oo ciidan uu ka buuxo, kaas oo ah nooca loo yaqaano Uralka. Khasaare balaadhan ayaa cadawga ku gaadhay halkaa iyada oo askartii gaadhiga saarayd ay badankood ku basbeeleen qaraxii iyo wax yar oo dhaawac halis ah lagu sii qaaday.
Dagaalka ayay magaaladu si fiican ula socotay iyadoo markii dambe la’isugu soo baxay fagaaraha magaalada si looga sheekeysto siday wax u dheceen. Intaa kadib ayay Wayaanihii waxay magaalada ku soo rogeen bandow iyada oo aan la furin shalay oo dhan wax meherad ah.
Xalay waxaa magaalada u daatay askar Woyane ah oo guryaha dadka kala baxaysay, tirada la taxaabay ayaan ilaa hadda cadayn waxaase lagu qiyasay ilaa boqol ruux oo shacab aan waxba galabsanin ah in lagala baxay guryahoodii.
Dagaalakan ayaa jawaab u ahaa dhaqdhaqaaq cadawgu ka sameeyey deegaanada ku wareegsan magaalada Qabridahare iyada oo geesiyada CWXO ay u ku soo talagaleen inay u dhagaan cashir yar oo gaaban askarta daalan ee sida qasabka ah ku hawl gala.
Wixii soo kordha kala socda halkan.